Uma udinga ngokushesha ukulungiselela isidlo esihlwabusayo futhi unempilo, inketho ephelele lokhu nokunye okufana nokolweni isibindi. Okokuqala, ibhali ngokwayo liyinqolobane amavithamini, amaphrotheni ephelele, kanye macro- futhi microelements. Futhi okwesibili, isidlo yakhiwa eceleni, okuyinto kuba nomphumela omuhle cishe wonke kwezitho zomzimba. Kunezindlela eziningana evumela isikhathi mnene ukupheka isidlo emangalisayo wale mikhiqizo ethandwa phakathi kwabantu.
Ezimweni eziningi, nokunye okufana nokolweni isibindi uzilungiselele njengoba izitsha ezimbili ezihlukene. Kodwa uma esigabeni sokugcina ukuhlanganisa kubo, uthola iphalishi, njengoba isisho, "Yum." Kudingeka sisebenze imikhiqizo ezivamile:
nokunye okufana nokolweni, nosawoti, onion, isibindi, izinongo, ufulawa, amanzi namafutha zemifino.
Ilungiselela nokunye okufana nokolweni isibindi ngezinyathelo ezintathu:
Okokuqala, kuzomele kube kwesibindi wageza abese uthathe naphakathi ngobukhulu izicucu. Khona-ke ukuhlanza anyanisi sidilike ku cubes ezinkulu. Esitsheni ehlukile mix usawoti, ufulawa, lamakha, bese breaded in kuyithuba le ngxube zonke isiqeshana isibindi wakufaka epanini abilayo uwoyela. Ukuvula ukudla ngakolunye uhlangothi, lapho ungakwazi ukwengeza anyanisi. Inani ukupheka isikhathi kunoma isiphi isimo akufanele budlule amaminithi 7-10. Kungenjalo, isibindi uyofana ematheni.
Ngesikhathi esifanayo epanini yamanzi anosawoti ukupheka nokunye okufana nokolweni. Kuyinto efiselekayo ukuthi luhlala friable. amanzi okweqile kungenza likhanyelwe.
Buckwheat walala kuso, lapho isibindi ethosiwe, ukuxuba kahle. Imikhiqizo kufanele sekuqala ukufudumala kungekho imizuzu engaphezu kwemibili. Futhi udinga ukukhanyisa phansi umlilo esiphansi.
Inhlanganisela avumelanayo imikhiqizo ikuvumela ukuba uthole isidlo esihlwabusayo kakhulu futhi flavorful.
Iphalishi nge isibindi ukugxusha
Ukuze nokunye okufana nokolweni isibindi waphenduka ethambile futhi obucayi xaxa, kungenzeka oyedwa ingxenye ukusebenzisa indlela kucutshungulwe. Ukuze wenze lokhu, kudingeka uqale ukulungiselela izithako main:
300 amagremu isibindi inkomishi isigamu nokunye okufana nokolweni, nosawoti, 4 wezipuni amafutha, 2 u-anyanisi, 150 namamililitha yamanzi kanye pepper kancane.
Kulokhu, zonke imisebenzi okumelwe yenziwe ngendlela elandelayo:
Okokuqala udinga zidlule nokunye okufana nokolweni. Ngemva kwalokho, kubalulekile ukuba Fry epanini ngaphandle amafutha. Izinhlamvu kumele zithole umbala onsundu ahlukile.
Khona-ke epanini Bilisa amanzi okudingayo, elicwiliswe nokunye okufana nokolweni ekugcobisa sipheke ukushisa low kuze okusanhlamvu usulungile ngokuphelele.
Isibindi wageza ezinqumela uthathe yizicucu bese Fry kwabo amafutha, ekuvimbeleni ukoma.
Inkhulumo lelungiselelwe eceleni inyama egayiwe.
I nengulube okuholela baxhumane oqotshiwe anyanisi gazinga futhi has imikhiqizo ezimbili wanezela amafutha, usawoti kanye pepper.
imikhiqizo Semi-siphelile ukuxhuma ndawonye uhlanganise kahle.
Uma umkhiqizo osuphelile esomile kakhulu, kungashiwo buhlanjululwe umhluzi hot noma ubisi olufudumele.
Ukuze uthole i engavamile futhi esihlwabusayo nokunye okufana nokolweni isibindi, iresiphi kungaqedwa ekuphumeni kwakho. Ngokwesibonelo, ukwethulwa kwe-imifino ukwenza isidlo egqamile futhi engeza awunazo juiciness. Ukuze le ndlela, ungasebenzisa izithako ezilandelayo:
300 amagremu inkukhu kwesibindi, onion, 150 amagremu nokunye okufana nokolweni, nosawoti, ingilazi yamanzi, 50 amagremu kawoyela yemifino, 1 isanqante kanye entwasahlobo anyanisi ipeni kancane.
Konke kwenziwa njengenjwayelo:
Isibindi okokuqala kudingeka ukugeza up, bese balikhipha nasezinguqulweni ifilimu, uthathe yizicucu naphakathi.
Amalunga ethosiwe emafutheni zemifino imizuzu 3 nxazonke.
Imifino nquma bese wengeza ukuba epanini. Thumela umkhiqizo welula amaminithi ambalwa.
Top ukuwa nokunye okufana nokolweni elele, ukuxubana, uthele wonke amanzi bese upheka kuze ibhali usulungile.
Phakani lokhu dish kangcono. Ngenxa yale njongo, ipuleti ngamunye kumelwe kugqoke iphalishi ashisayo nemifino isibindi, bese esivulekile ufafaze lonke nge oqoshiwe anyanisi oluhlaza.
Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa ukusiza
Namuhla wonke wekhaya ekhishini kukhona eziningi, kusetshenziswe amasu ahlukene, esiza ukuba abhekane umsebenzi onzima sokulungiselela ukudla. Ngokwesibonelo, kakhulu nje ukulungiselela nokunye okufana nokolweni kanye isibindi ku multivarka. Kuthatha imizuzu embalwa ukukhulula ukhukhuva isidingo njalo ukugcina ithrekhi ukuthi imikhiqizo emsini. Kukhona iresiphi elula kakhulu, edinga:
2 izinkomishi nokunye okufana nokolweni, 500 amagremu isibindi (yenkomo kangcono), usawoti, onion, pepper, amakhambi nezinongo.
Inqubo ukupheka kuhlanganisa izinyathelo ezilandelayo:
Okokuqala, isibindi kufanele uthathe yizicucu eziningana usayizi ingxenye ekhethiwe.
Ngemva kwalokho, kufanele anyanisi nquma izindandatho uhhafu.
Zombili imikhiqizo sihlanganise endishini Multivarki, engeza usawoti, izinongo, amakhambi kanye pepper kancane.
Vala lid ukusetha imodi "ukuthosa" noma "baking" (kuye ngokuthi model). I timer ukuthola imizuzu engu-15.
Iqolo engahashazanga ngaphansi kwamanzi abandayo futhi bayeke esitsheni. Uma umswakama kuyoba encane, uketshezi kungaba kancane ukuze ungeze.
Setha "wokukucima" modi amaminithi 45.
Uma timer kubikezela ukuphela komhlaba inqubo, iphalishi enongiwe isibindi ongabeka ngokuphepha phezu kwezitsha udle ubumnandi.
Georgia, Racha: incazelo, umlando kanye ezikhangayo
Kungani baphupha incwadi? oneiromancy